7 Bilyaneer oo aan lacagtooda u isticmaalin sida taajiriinta kale - Muraayad
Home Nolosha 7 Bilyaneer oo aan lacagtooda u isticmaalin sida taajiriinta kale
7 Bilyaneer oo aan lacagtooda u isticmaalin sida taajiriinta kale
Toddobo nin oo bilyaneero ah balse aan u nooleyn sida taajiriinta kale!
Maal qabeennada u nool sida dadka caadiga ah | Image Credit: Reuters
Dadka hatida badan heysta waxay caan ku yihiin in ay u noolaadaan si ka duwan sida dadka caadiga ah, noloshooduna way sarreysaa. Laakiin dhammaantood sidaas ma wada aha.
Toddobo ka mid ah bilyaneerrada ugu magaca dheer caalamka lacagtooda uma isticmaalaan sida taajiriinta kale.
Run ahaantii waxay u nool yihiin sida dadka caadiga ah oo kale, dhaqaalahoodana kama muuqdo.
Waa maal qabeen u dhashay dalka Mareykanka, waxaana uu milkiile iyo maamule ka yahay Shirkadda Berkshire Hathaway.
Warren Buffet wuxuu wali ku nool yahay guri uu sanadkii 1958-kii ku iibsaday $31,500.
Wuxuu ka mid yahay bilyaneerrada ugu xikmadda badan uguna dhaqaale ilaalinta badan caalamka. Wuxuu aad uga soo hor jeedaa in wax la khasaariyo ama si micno darro ah lagu bixiyo.
Xitaa telefoonka gacanta ma heysto, miiskiisa shaqadana uma saarna wax computer ah.
Markii uu saaxiibkiis Bill Gates ku booqdo magaaladiisa, Buffet laftiisa ayaa kasoo qaada garoonka diyaaradaha.
Raashinkiisa joogtada ah waxaa ka mid ah shan dhalo oo coke ah iyo bataati la dubay.
Ninkan oo ah aasaasaha iyo madaxa shirkadda Facebook, wuxuu ku socdaa gaari iska raqiis ah oo noociisu yahay Volkswagen, kuna shaqeeya marshada la badbaddalo.
Isagoo ku jira liiska maalqabeennada ugu waaweyn adduunka ee dhinaca tiknoolojiyadda ku taajiray, Mark Zuckerberg wuxuu door biday inuu ku jiro nolol la mid ah tan dadka caadiga ah.
Wuxuu si farxad leh kula nool yahay xaaskiisa Pricilia Chan iyo labadooda gabdhood ee yar yar.
Milkiilaha Facebook wuxuu ku qanacsan yahay funaanaddiisa gacma gaabka ah iyo surwaalka Jeans-ka ah oo uu mar walba xiran yahay.
“Runtii waxaan jeclahay inaan nolosheyda ka dhigo mid sahlan si aan fursad ugu helo go’aannada lagu xoojinayo adeegga aan u hayo bulshada,” ayuu hadda ka hor yidhi Mark Zuckerberg.
Sanadkii 2014-kii wuxuu iska iibiyay gaari Acura ah oo qiimihiisu ahaa $30,000, wuxuuna kusoo baddashay midka hadda uu wato ee Volkswagen-ka ah.
3- Carlos Slim Helu
Ganacsadahan iska leh shirkadaha Carso wuxuu muddo ka badan 40 sano ku nool yahay hal guri oo ka kooban lix qol iyo fadhi.
Halkii uu lacagtiisa faraha badan ee wareegta ka isticmaali lahaa wuxuu dib ugu sii celiyaa ganacsigiisa baaxadda leh.
Waa ninka ilaa hadda ugu taajirsan waddanka Mexico oo dhan. Isagoo heli kara gawaarida noocyadooda ugu dambeeya iyo diyaarad khaas ah, wuxuu ku adkeystay inuu wato gaari waa hore la isticmaali jiray oo noociisu yahay Mercedes Benz.
Gurigiisa waxaa laga kariyaa hal dhari oo ay isla wada isticmaalaan carruurtiisa iyo carruurta uu awoowga u yahay.
4- Charlie Ergen
Bilyaneerkan Mareykanka ah waa milkiilaha shirkadda ganacsiga ee Dish Network. Waa maal qabeen awooda inuu nolosha ugu cajiibsan ku raaxeysto balse ilaa hadda wuxuu jecel yahay inuu si sahlan u noolaado.
Carlie Ergen waa hoggaamiye ganacsi balse wuxuu sidoo kale mudnaan siiyaa nolosha qoyskiisa.
Waxaa lagu yaqaannaa in markuu subax walba gurigiisa ka baxayo uu bac kusii qaato qadadiisa.
Xilliyada safarka lagu jirana wuxuu dadka ka shaqeeya shirkaddiisa la wadaagaa qolalka hoteellada.
5- Amancio Ortego
Maalqabeenkan u dhashay dalka Spain waa aasaasaha shirkadda dharka sameysa ee Inditex.
Waa nin aysan maskaxdiisa ku jirin fikrad taajirnimo, wuxuuna shaqaalihiisa kula cunteeyaa makhaayadaha shirkaddiisa ku dhex yaalla.
Ortego wuxuu sannado badan ilaashanayay noloshiisa shakhsiyadeed, inta badanna wuxuu nasasho u tagaa guri uu ku leeyahay magaalada A Coruña ee dalka Spain, halkaas oo uu waqti kula qaato xaaskiisa.
Wuxuu si joogto ah u fariistaa hal makhaayad oo uu qaxwada ka cabo.
Sida bilyaneerka Mareykanka ah ee iska leh shirkadda Facebook, Ortego wuxuu jecel yahay in noloshiisu ay noqoto mid fudud.
Taajirkan kasoo jeeda dalka Sweden wuxuu maamule iyo milkiile ka yahay shirkadda ganacsiga ee IKEA.
Marka uu diyaarad raacayo wuxuu fariistaa kuraasta dadka caadiga ah, mana jecla inuu galo qeybta VIP-da ee dadka lacagta leh ay fariistaan.
Xitaa marka uu magaalada aadayo wuxuu raacaa basaska dadweynaha.
Kamprad wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu taarijsan qaaradda Yurub, laakiin kama dareemeysid lacagtiisa marka uu diyaaradda saaran yahay iyo marka uu ku cunteynayo makhaayadda u dhow goobtiisa shaqada.
7- Azim Premji
Ganacsadahan Hindiya u dhashay waa milkiilaha shirkadda isgaarsiinta ee Wipro. Waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay maalqabeenka dhinaca tiknoolojiyadda ee ugu taajirsan guud ahaan dalka Hindiya.
Waxa uu caan ku yahay inuu xakameeyo dhaqaalaha ku baxa isaga iyo howlaha shirkaddiisaba.
Wuxuu ku socdaa gawaarida celiska ah ee lasoo istcimaalay. Laakiin mararka qaar kama xishoodo inuu mooto bajaaj raaco xilliyada uu garoonka kasoo dago iyo marar kaleba.
Xitaa marka uu xafiiska kasii baxayo maalin walba wuxuu shaqaalaha xasuusiyaa inay nalalka soo damiyaan.
Previous article8 arrimood oo ku dhaca gabdhaha kabaha dhaadheer xirta
Next article6 ka mid ah dadka ugu taajirsan dunida balse aan la ogeyn